ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်...! - Thadin
[ May 20, 2019 ] ဆုငွေထုတ်ထားတဲ့ တရားခံ သတင်းပေးကူညီမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးရမိသော်လည်း.. သတင်းပေးသူရင်ဖွင့်ပြီ NEWS
HomeKNOWLEDGEဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်…!
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်…!
April 26, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်…!
ဒါပေမဲ့ အော င်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ရရှိတတ်ပါတယ်။
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာ ယာယာနဲ့ အခြေချနိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘဝမှာ တောင့်တစရာမလို ဘဲ ငွေကြေးပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ နေရ တတ်ပါတယ်။
ခါးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောင်းခြင်းရော ကံဆိုးခြင်းရော နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။
ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညာဘက်လက်ဝါးပြင်မှာ မှဲ့ရှိရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းမယ့်အချိန် က လက်ဝါးပြင်ပေါ်က မှဲ့ရဲ့ တည်နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
မှဲ့က လက်ဝါးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငယ် ရွယ် တဲ့အချိန်ကစပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီးလက်ဝါးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ရှိမယ်ဆိုရင် အသက်ရလာတဲ့အချိ်န်မှာမှ စည်းစိမ် ဥစ္စာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှာပါ။
ဒါပမေဲ့ အော ငျမွငျမှုနဲ့ ငှကွေေးနှဈခုစလုံးက အသကျ ၃၀ နောကျပိုငျး ဒါမှမဟုတျ အိမျထောငျကပြွီးမှ ရရှိတတျပါတယျ။
မကျြခုံးနှဈခုကွားမှာဖွဈဖွဈ၊ မကျြလုံးနှဈလုံးကွားမှာဖွဈဖွဈ မှဲ့တဈလုံး ရှိမယျဆိုရငျ ခမျြးသာပွီး ဘဝတဈခုကို သာသာ ယာယာနဲ့ အခွခေနြိုငျမယျ့ သူတဈဦးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဘဝမှာ တောငျ့တစရာမလို ဘဲ ငှကွေေးပွညျ့ပွညျ့ စုံစုံနဲ့ နရေ တတျပါတယျ။
ခါးရဲ့ဘေးတဈဖကျတဈခကျြမှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောငျးခွငျးရော ကံဆိုးခွငျးရော နှဈမြိုးစလုံးဖွဈစနေိုငျ ပါတယျ။
ဥစ်စာပစ်စညျးပွညျ့စုံကွှယျဝပွီး ကွီးပှားတိုးတကျမှာ ဖွဈပမေဲ့ ဘဝရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ဝမျးနညျးစရာ၊ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာတှကွေုံရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ညာဘကျလကျဝါးပွငျမှာ မှဲ့ရှိရငျ ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုနဲ့ ကွှယျဝမှုနှဈမြိုးလုံး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးမယျ့အခြိနျ က လကျဝါးပွငျပျေါက မှဲ့ရဲ့ တညျနရောအပျေါမှာမူတညျပါတယျ။
မှဲ့က လကျဝါးရဲ့ အပျေါပိုငျးမှာရှိမယျဆိုရငျငယျ ရှယျ တဲ့အခြိနျကစပွီး အောငျမွငျပွညျ့စုံမှာဖွဈပွီးလကျဝါးရဲ့ အောကျပိုငျးမှာ ရှိမယျဆိုရငျ အသကျရလာတဲ့အခြိနျမှာမှ စညျးစိမျ ဥစ်စာနဲ့ အောငျမွငျမှုတှရေရှိနိုငျမှာပါ။
ကျော်ကျော်နန္ဒ အသုံးချတာ ခံလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက်
This Month : 38981
This Year : 234379
Total Users : 593403
Total views : 2723812